MyManilla: vingnya Ọdịnihu nke Teknụzụ Ego na Africa
MyManilla bụ usoro ntanetị dijitalụ nke teknụzụ nke oge a na-achụpụ ụdị mgbochi niile ndị ọrụ na-eche ihu mgbe ha na-anwa ịnweta ọrụ ego.
MyManilla bụ ngwaahịa nke Manilla Digital Application Ltd; otu ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ dị na Abuja, Nigeria.
Ebumnuche nke MyManilla bụ ịmepụta ikpo okwu nke na-eme ka ịnweta ọrụ ego maka mmadụ niile; tumadi ndị nọ na ngalaba na-enweghị ego.
Site na nke a, obere ndị ọchụnta ego, ndị ọrụ bekee, ụmụ akwụkwọ, ndị ọrụ aka, obodo ndị na-emekọ ihe ọnụ, ndị ọrụ ọrụ, na ndị ọzọ na-akpata ego nwere ike igbochi ha ịnweta ọrụ ego dị mkpa.
Dika akuko nke PwC fintech na bank banyere mere na 2020, ulo oru ntinye ego nke ulo oru fintech nke Naijiria n’ime afo asatọ gara aga ruru $ 204 nde.
Fintech nke Nigeria nwetara $ 103.4 ego site na njedebe nke afọ 2018. Nke a gosipụtara ihe karịrị ọkara (58%) nke ngụkọta mmalite mmalite n'otu oge a na-enyocha.
Nke a gara n'ihu igosi na ụdị ọrụ ego na-agbanwe ngwa ngwa, yana oge, ịnweta ọrụ ndị a ga-abụ nke mebere kpamkpam.
MyManilla dị na mmalite nke ọganihu ndị a na teknụzụ na-enweghị atụ iji kpochapụ ụdị nrụgide niile metụtara ịnweta ọrụ ego.
MyManilla na-enye uru ndị a na-adịghị ahụkebe ma e jiri ya tụnyere ụlọ ọrụ ego.
Fọdụ n'ime uru ndị a gụnyere - mmeghe akaụntụ na enweghị nhịahụ, ụgwọ zoro ezo efu, ịkwụ ụgwọ ụgwọ, nchekwa akpaaka, mkpuchi na ọtụtụ ndị ọzọ.
"Anyị nwere nnukwu mmasị ime ka ndụ dị mfe maka ndị ahịa anyị na ndị na-azụ ahịa ma anyị na-ahụ na nke a ga-enye ha udo dị ha mkpa maka ịnweta ọrụ ego iji gboo mkpa ha kwa ụbọchị". - 'Goke Alade Olateju, Onye guzobere / CEO, MyManilla.
Manilla Digital kwenyere na MyManilla bụ ọdịnihu nke teknụzụ ego ebe ọ bụ na anyị mepụtara usoro ihe eji eme dijitalụ All-In-One nke na-elekwasị anya n'ịkwọ ụgbọ, ịgụ akwụkwọ ego, nkwado maka obodo ndị na-ekwenye ekwenye na akpaaka nke usoro ha, ego mgbazinye ego, ego ezumike nka atụmatụ n'etiti atụmatụ ndị ọzọ. Anyị na-anapụta ọdịnihu nke ego taa; "Enweghị kwụ n'ahịrị, naanị pịa".
N'ihi ya, n'oge na-adịbeghị anya, Manilla Digital bịanyere aka na nkwekọrịta na Federal Civil Service Staff Multipurpose Cooperative Union nke nwere ihe karịrị 150 ndị na-arụkọ ọrụ ọnụ na karịa ndị 100,000 otu onye n'otu n'otu.
Ebumnuche a bụ iji mee ka ego, ego mgbazinye, ịkwụ ụgwọ na ọrụ ego ndị ọzọ dị mfe maka ndị na-emekọrịta ihe na ndị otu ha.
Dabere na Maimuna Sabo Abubakar, onye na-ahụ maka ngalaba / Chief Growth Officer, nkwekọrịta na mmekorita dị ka nke a, ga-emechi oghere ego na Naịjirịa ọkachasị n'ime mpaghara ugwu mba ahụ.
O gosipụtara obi ike na n'ime afọ ole na ole, a ga-enwe nnukwu mmụba na mmuta ego na mpaghara a nke ga-eme ka ndị mmadụ na-arị elu karịa ịda ogbenye.
N'ụbọchị ndị a ebe a na-enyocha ihe omume ego yana ọkwa ntụkwasị obi na-arịwanye elu n'etiti ndị na-azụ ahịa, anyị emeela usoro doro anya iji nyere gị aka idobe ego gị, duzie gị ebe ị ga-etinye ya, ma nyere gị aka ịkwadebe maka ọdịnihu ego. .
Don't na-enweghị nsogbu banyere otú itinye ego n'ihi na anyị ga-mgbe niile na-ewetara gị mma ego ohere na-eduzi gị ọ bụla nzọụkwụ nke ụzọ.
Weebụsaịtị MyManilla na ngwa ebuputara na mbido Machị 2021 ma ndị mmadụ nwere ike ị nweta nkwado ọ bụla, ọrụ ndụ na klaasị.
A tọhapụrụ beta ụdị nke ngwa ahụ ma mee ka ndị ọrụ gam akporo buru ụzọ dịrị na Storelọ Ahịa Play, ebe a ga-ewepụta iOS mbipụta n'oge na-adịghị anya.
MyManilla ga-agbanwe, ruo mgbe ebighi ebi, otu ụzọ Africa na ndị Africa si ahụ ma nweta ọrụ ego.
Emebere ya ka o buru isi ego dijitalụ nke Afrika niile, nke teknụzụ na-eme ka ọ dị mfe ịnweta ọrụ ego maka mmadụ nkịtị, na nke ọzọ iji nyere ha aka igbo mkpa ha kwa ụbọchị.
Skillup Africa malitere Mmemme maka ndị na-eto eto Tech Tech